Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 54aad | Jowhar Somali News Leader
Home LOVE STORY Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 54aad
Carro ayaaba meesha laga qaado dhamaado Yaasiin geerishkiisa qasaarihii uu dhigay ayaa soo baxay waxaana aabhihis soo gaaray in lacag lagu leeyahay mudo usbuucna aan la furin carwada aabe Cali Kaar nin degan.
Ayaa uu ahaa ugu horeyn waxa uu soo ogaaday lacagta lagu leeyahay inta ay la egtahay waxa uuna wacay Yaasiin oo uu sheegay in uu ugu yimaado guriga caawa Yaasiin waa uu garan karay sababta loogu yeerayo xiliigii la soo wacaayey oo duhur aheyd ayuu xaafada jiifay.
Yaasiin isaga oo cagojiid ayaa uu xaafadii aabahiis tagay xilli la wada sugaayey Hooyo Batuulo in wiilkeeda uu imaanayo ayaa loo sheegay balse waxa laga hadlaayo ma oga waxayse sawiratay in wiilkeeda uu ka soo baxay balantii ay aabahiis galeen oo in la bogaadiyo loo wacayo alla miskiin yaa u sheega in xaalka uu sidaa ka duwan yahay.
Yaasiin markii uu soo galay qolkii ay hooyadiis iyo Aabahiis ku jireen ayaa uu aabe Cali Kaar ku yiri.
Haye ma timid isma laheyn waa uu imaanayaa ee albaabka noo xer
Hooyo Batuulo oo dareentay in xaalka u sameyn ayaa tiri
Caliyow ii sheeg ma wax daran ayaa jira
Wiilkaaga inuu waxba aheyn hore ayaan kugu sheegay hooyo ayaan wax ka xumaan mooyee
Xaaji ii sheeg muxuu sameeyey gabadhii miyuu dilay
Haye Yaasiin maa u sheegtid hooyadaa maxaad u aamusan tahay
Maya Hooyo Falis ma dilin
Waa yahayee side wax u jiraan bal ii sheega waxa jira waad I waaleysaan
Hooyo kasta oo doqon dhasha waali kama dheera laakiin aniga nin iimaankiisa qabo ayaan ahay nabar aad fileysidna naxdin malaha Xaajiyo wiilkaaga mudo usbuuc ah carwadii ma furin sabab kale ma jirto deyna waa lagu leeyahay carwada badeeco uu gado maba haayo sow sidaa maaha.
Side waxaan ku dhaceyn Yaasiin kaalay miyaadan aheyn nin masuul ah maxay tahay waxa aan maqlayo.
Weydii wiilkaaga lacagta maqan halkee ayay jirtaa ma deyn ayay ku maqan tahay mise ganacsi kale ayaa uu geliyey.
Waad maqleysaa sheeg halka aad lacagta geysay ileyn iyada isma qaadin
Hooyo Suuq xumo waa jirtay sidoo kalana waan biilaneynin
Hal naag maad bileysay mise labo naag u sheeg hooyadaa
Hooyo batuulo oo amakaag ku dhacay ayaa tiri
Kaalay ma naag kale ayaad guurisay
Maya Hooyo naag kalana ma aroosin sideen Falis naag ula guursadaa aniga oo og in ay reerkeeda iga soo go’day.
Waa ay wanaagsanaa laheyd in aad sharafkaas u heyso miskiintaas nin ayay ku mooday laakiin waxaad tahay ma jirto maad u sheegtid in xaaskaaga labaad ay tahay Qaad iyo Shiishad Xaajiyo kan Faa’ido malaha furaheyga ha siiyo deynta waan iska bixinayaa qolkana waan fasaxayaa aniga waa ogaa laakiin adiga ayaan ku qancinaayey.
Qaad aa ma iminkaa ciyaalsuuqnimo keentay alla anigaa hoogay
Xaajiya mar horaa hoogtay ee adigaa been isu sheegaayey Yaasiin wiil kuuma noqdo waana ogaa inuu sidaan iyo si ka xun uu keenayo balse gabadha miskiinta e euu soo siray ayaan lahaa u qurxi ninka ay reerkeeda kaga soo go’day.
Haye maxaad sugeysaa iska soo wareeji furaha adigaa sharafkii laguu yeelay xafidan weyday sideedana sharaf waxaa yaqaan nin sharfan wax badana ayaa uu aabahaa ii kaa sheegi jiray balse aniga ayaa qaadan waayey.
Kolay wiil la dhalay ayaa tahay meel laguu tuurayo ma jirto adiga iyo xaaskaaga gurigaan cunto u soo doonta ijaarkana waala bixinayaa.
Waa sidaas orodoo na dhaaf qof aan sina loo xisaaban Karin ayaa tahay
Yaasiin markiiba qolka ayaa uu ka baxay waxa uuna sheegay in furaha uu guriga jiro oo uu keenayo
Hooyo Batuulo oo halkeedii la yaab la yuurarato ayaa Aabe Cali ku tiri
Xaajiyow waan dareemayaa dhibka intaa la eg ee uu sameeyey wiilkayga hadda maxaan yeelnaa
Deynta uu na geliyey waa inla bixiyaa
Sax deyn waa dhiibid laakiin lacag intaa la eg sow dhib maaha hadda aniga waxaan haayaa xoogaa dahab oo aan hablaheyga ugu talagalay beri ayaan soo iibinayaa ee kaasho wax kala oo aan haayo ma jirtee.
Xaajiya waan ku dareemayaa in masuuliyada qaladka aan isa saareyso qaladkaan waa dhacay waxbana ha isku kurbeyn aniga ayaana xalinayo dhalainyarada lacagta leh waan is fahamnay si tartiib tartiib ah ayaan u bixin doonaa waana isku raacnay ee adiga is deji waxba gabdaheena bilicdooda ha iibin deyn waa ay gudmeysaa.
Illaahay ha kuu saqiro Xaaji aniga ma aqaan waxaan sheego.
Hooyo Batuulo markiina waa ay ka baxday qolka, Falis waxa dhacay wax kalama socoto Yaasiin waxba uma sheegin subaxii xigay ayaa uu aabihii furaha u geeyey sidii hore loogu amray ayaa uuna yeelay.
Previous articleAkhriso: Yaa ka faa’iideysanaya Wabarashada lacag la’aanta ah ee Dowladdu bixinayso?
Next articleWariye C/risaaq Catoosh oo muddo sanad ka ruqseystay Howshii BBC-da